Bridgertons - Mwaka wechipiri Wakasimbiswa | Bezzia
Iwo maBridgertons: Mwaka wechipiri Wazvino Wasimbiswa!
Susana godoy | 27/04/2021 14:00 | Nhau
Iwo maBridgertons anga ari mamwe emabudiriro makuru ekuvhara gore ra2020. Mwaka wekutanga wakaratidzwa paKisimusi yegore rambotaurwa, pachine mwedzi vanhu vachiri kutaura nezve rangano uye vanonyanya kutaurwa. Naizvozvo, mushure mebudiriro huru yenyaya ino yenguva, zvaingogoneka kumirira chikamu chechipiri.
Ehezve, zvaitarisirwa apo isu tichipindura zvakanaka, asi izvo zvimwe zvatisingade zvakanyanya huwandu hwakawanda ndizvozvo Duke weHastings haazove mumwaka wechipiri wakamirirwa kwenguva refu. Hongu, ndeimwe yelimu uye imwe yejecha, saka hatisati taziva kuti izvi zvese zvinokanganisa sei kubudirira kwechikamu chechipiri, icho chatotanga kupfura.
1 Mwaka wechipiri weNetflix nhepfenyuro uchave sei
2 Bridgerton mwaka 2 ichabuda riini?
3 Zviso zvitsva paThe Bridgerton?
4 Farewell kuna Duke
Mwaka wechipiri weNetflix nhepfenyuro uchave sei
Pasina kupinda mune vapambi, isu tiri pachena kuti imwe yeakakosha mabhurasho akatiita kuti tidanane nemwaka wekutanga yaive nyaya yerudo. Iye Duke naDaphne vakadanana zvakazara uye vakawisira pasi zvimwe zvipingamupinyi kuti vave pamwe chete.. Vakatarisana nematambudziko akati wandei, pakati payo yaive yekuita vana. Asi isu hatisi kuzoendesa kumberi chimwe chinhu, kune avo vese vasati vazviona.
Kwechinguva, isu vedu takazviita, taifanira kuwana kubva mukuziva mafambiro achaita iyi nyaya yakanaka, asi zvinoita sekunge isingaite saizvozvo. Mwaka mutsva hauzove kuenderera kwekutanga, asi izvozvi zvichatarisa kune imwe yenhengo dzaBridgerton uye ichave iri mukoma mukoma.. Nekuti sekuziva kwako zvechokwadi, zvine hukama nemabhuku. Nekudaro, isu tichaona maitiro atinoita kuti Daphne wechidiki arege kugomera iye Duke uye zvinopesana. Zvinoita sekunge Anthony anotora chinzvimbo chehutungamiriri uye achatifadza nerudo rutsva uye nyaya nyowani kana zvakavanzika.
Bridgerton mwaka 2 ichabuda riini?
Zvichiri mangwanani-ngwanani kuti utaure nezve iyo Bridgerton mwaka 2 ichabuda. Kubva kudhirowa kwayo kwatanga mwaka uno. Isu tinoziva kuomarara kwazviri dzimwe nguva kupfura nyaya yeiyi caliber, ye izvo zvine chokwadi chekuti kusvika kupera kwegore rino 2021 kana pamwe kutanga kwa2022, hatizove nenhau huru pakati pemaoko edu. Hongu, yakamirirwa nemoyo wese asi izvi zvichatipa nguva yekuzeya kuti mumwe wevanyori vanopokana haachazove mune akadaro kutora mafirimu uye mukuburitswa kwayo mune ramangwana.
Zviso zvitsva paThe Bridgerton?
Hwakafanana nehupenyu pachahwo, vamwe vanobva uye vamwe vanosvika nechisimba. Zvakanaka, muBridgertons zvaisazove zvakasiyana zvakare. Kubva kunyangwe, Regé Jean-Peji haasi mumutambo, Simon Ashley anosvika. Zvinotaridza kuti urwu richava rudo rutsva rwaAnthony, ndiko kuti, dangwe remhuri. Ehezve, zvinoita sekunge iyo nyaya inodzoka yakatakura yakawanda manzwiro nerudo, pamwe nesimba. Asi ichokwadi kuti mutambo uyu uri kusimukira zvakare zvisati zvamboitika. Musanganiswa unopfuura wekuputika unoita kuti tide zvakanyanya uye nekuwonekwa zvishoma. Izvo zvinofungidzirwa kuti vakasara vevatambi, vemhuri inodakadza, vacharamba vachienda nesu imwezve mwaka. Asi ichokwadi kuti kuva nechokwadi chizere, isu tichifanira kuramba takamirira.
Farewell kuna Duke
Hongu, tinosimbirira zvakanyanya, asi ndezvekuti iye chaiye aive mutambi mukuru uye sezvo izvi zvisingawanzo kuitika munhevedzano dzakabudirira, social network atendeukira kune mutambi. Naizvozvo, pa Instagram takaona marongero akaitwa iye naDuke pachavo pakubudirira kwake kukuru, kusvika parizvino. Zvinotaridza kuti akange asainira kwemwaka mumwe chete uye nekudaro, haachaenderera mberi kuve chikamu, asi anogara aine mazwi akanaka kune vaanotamba navo uye nebasa guru rakamupa kuzivikanwa kwenyika dzese. Ungada here kuti ive mumwaka wechipiri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Iwo maBridgertons: Mwaka wechipiri Wazvino Wasimbiswa!
Maitiro Ekuita iyo Dumbbell Row Zvakakodzera